अनि भक्तबहादुरले पाए नागरिकता- फिचर - कान्तिपुर समाचार
अनि भक्तबहादुरले पाए नागरिकता
पछिल्ला ५ दिनमा उनले भोगेको दुःख र हैरानीको फेहरिस्त लामै छ तर श्रीमतीकोनागरिकता र छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाउन बाटो खुलेकाले बोझ हल्का भएको ठानेका छन्
मंसिर २५, २०७८ रमेशकुमार पौडेल
चितवन — २०३३ मा जन्मेका भक्तबहादुर चेपाङ ४५ वर्ष पुगे । कानुनले १६ वर्ष पुगे नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन मिल्छ । भक्तबहादुर भने अझैसम्म नागरिकताविहीन थिए । पटकपटक हैरानी र झन्झट बेहोरेकै कारण उनी नागरिकता नबनाउने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए । तर छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाउनुपर्ने भएपछि उनी करैले भरतपुर आउन बाध्य भए ।
जेठा छोराछोरी चन्द्र र एलिसा कक्षा ८ मा पढ्छन्, कान्छा छोरा ७ र कान्छी छोरी ४ मा । कक्षा ८ को परीक्षा फाराम भर्न जन्मदर्ता चाहिन्छ । त्यसका लागि बाबुआमाको नागरिकता अनिवार्य भइहाल्यो । तर भक्तबहादुर र उनकी श्रीमती नीरमाया दुवैको नागरिकता थिएन । छोराछोरीको पढाइ नै रोकिने भएपछि राप्ती नगरपालिका–१३ स्थित पहाडी गाउँ लोथर कान्दाको पखेरो ज्यारबाङबाट उनी प्रशासन हानिएका हुन् । जसमा सहजीकरण गरिदिए भक्तका छोराछोरी पढ्ने कान्देश्वरी विद्यालयका प्रधानाध्यापक बालकृष्ण थपलियाले ।
भक्तबहादुरका बाबु सेतुलाल २०५८ मा बिते । तर उनले नागरिकता निकालेका थिए । २०६१ मा घरमा आगो लाग्दा घरसँगै सेतुलालको नागरिकता पनि जलेको थियो । सेतुलालबाहेक वंशजको नाता खुल्ने भक्तबहादुरका आफन्त अरू कोही छैनन् । भक्तबहादुरले नागरिकता बनाउने प्रयास गर्दा बाबुको नागरिकता ल्याउन भन्थे । नागरिकता भने जलिसकेको थियो । अब के गर्ने ? कसैले उपाय लगाइदियो, ‘बाबुको नागरिकता लिएको विवरण प्रशासनको ढड्डामा खोज्ने । रेकर्ड निकालेर त्यही आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउने ।’
सदरमुकाम खासै नटेकेका, प्रशासन कार्यालयमा पुगेर कसलाई भनेर, कहाँ ढड्डा खोज्ने मेसो नभएका भक्तबहादुर उक्त झन्झट मोल्न अघि सरेनन् । अन्ततः अहिले आफ्ना लागि नभए पनि सन्तानका लागि त चाहिने नै भयो । भक्तबहादुरका बाबु सेतुलालले कहिले नागरिकता बनाएका थिए ? गाउँका रत्नबहादुर चेपाङले सम्झिए, ‘मैले र भक्तको बाले सँगै नागरिकता बनाएको हो । त्यो बेला लोथरमा टोली आएको थियो । यो २०४६ जेठको कुरा हो ।’ यही सूचना बोकेर प्रअ थपलिया गत मंसिर १७ मा प्रशासन कार्यालय पुगेर भक्तबहादुरको समस्या राखे । केही बेरपछि कर्मचारीले ढड्डा पल्टाउन थाले । सेतुलालले नागरिकता लिएको रेकर्ड भेटियो । निरक्षर भक्तबहादुरलाई ‘ल बाबु चिन’ भनियो । पाना पल्टाउँदै जाँदा सेतुलालको फोटो देखेर भक्त खुसीले उफ्रिए ।
बाबुले नागरिकता लिएको रेकर्ड भेटिए पनि अन्य प्रक्रिया, सर्जमिन, मुचुल्का र प्रहरी प्रतिवेदनबिना नागरिकता पाउन सम्भव थिएन । सबै कागजात तयार गरेर बुधबार बिहानै उनी प्रशासन छिरे । अझै पनि कर्मचारीले नागरिकता दिन अप्ठ्यारो पर्ने बताए । अब के गर्ने मेसो नपाएका भक्तबहादुरले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङलाई आफ्नो समस्या सुनाए । सबै कागजात हेरेपछि तामाङले निवेदनमाथि लेखिदिए, ‘वडाध्यक्षबाट सनाखत गराएर नागरिकता दिनू ।’ धन्न वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर चेपाङ भण्डारामै रहेछन् ।
भण्डारा राप्ती नगरपालिकाको केन्द्र हो । भण्डारा भरतपुरबाट करिब २५ किमिको दूरीमा पर्छ । त्यहाँबाट भक्तबहादुरको घर ज्यारबाङ पुग्न गाडी र पैदल गरी कम्तीमा ६ घण्टा लाग्छ । वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर आएर सनाखत गरेलगत्तै गत बुधबार दिनको ४ बजे भक्तबहादुरको हातमा नागरिकता पर्‍यो । नागरिकता झिक्न भक्तबहादुरले पछिल्ला ५ दिनमा भोगेको दुःख र हैरानीको फेहरिस्त लामै छ । प्रअ थपलिया नै पछि लागेर नआएको भए यति कसरतले मात्रै नागरिकता पाउने थिइनँ भन्ने भक्तबहादुर सुनाउँछन् । ‘अब नीरमायाको नागरिकता सजिलै बन्ने भयो । छोराछोरीको जन्मदर्तामा पनि बाधा परेन,’ नागरिकता हात परेपछि भक्तबहादुरले कार्यालयबाट बाहिरिँदै भने ।
जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चेपाङहरू अहिले हूल बाँधेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालय आइरहेका छन् । यो हूलमा नागरिकता बनाउने उमेर भर्खर पुगेकाहरू मात्रै हैन, उमेरले कपाल फुलाइसकेका ज्येष्ठ नागरिकसमेत छन् । नागरिकता फाँटका कर्मचारीले निवेदन बुझेपछि एकएक गर्दै माइकबाट नाम बोलाउँछन् र बाँकी प्रक्रिया बताउँछन् । यसरी नाम आउनेमा प्रायः चेपाङ नै छन् ।
फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन गर्ने सूचना आएपछि नागरिकता फाँटमा एकाएक चाप बढेको हो । नागरिकता नबनाएका चेपाङ समुदायलाई राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले नै गाडी चढाएर प्रशासन कार्यालय ल्याउने गरेका छन् । नागरिकता बनाएपछि मतदाता नामावलीका लागि फोटो खिचाएर नेताहरूले नै उनीहरूलाई घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरेका छन् । यसैले गर्दा भीडभाड भएको हो ।
प्रजिअ तामाङका अनुसार कार्यालयबाट प्रायः दिनमा ७०/८० जनाले नागरिकता बनाउँथे । केही दिनयता यो संख्या दोब्बरभन्दा बढी हुने गरेको छ । अशक्त, पिठ्यूँमा शिशु च्यापेका महिला, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिकहरूको समेत उपस्थिति उल्लेख्य हुन थालेपछि सोहीअनुसार प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । ‘गाह्रो अप्ठ्यारो के कसो छ बुझिरहेको छु, असहज भए–नभएको सेवाग्राहीबाट बुझेको छु । आफैं नागरिकता फाँटमा बसेर सेवामा सहजीकरण पनि गरिरहेको छु,’ उनले भने ।
प्रकाशित : मंसिर २५, २०७८ ०९:२३